नविल बैंकले घर/जग्गा किन्न ७. ९ प्रतिशत ब्याजदरमै ऋण दिने, कसरी लिने र के के चाहिन्छ कागजात? – Sanchar Patrika
August 12, 2020 226
३६ औं वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर नविल बैंकले घर, जग्गा किन्न सस्तो ब्याजमा ऋण दिने अफर ल्याएको छ।
वार्षिक ७. ९९ प्रतिशत व्याजदरमै ग्राहकले नविल बैंकबाट घरजग्गा किन्नका लागि ऋण लिन पाउने छन्। बैंककी रिटेल लेन्डिङ प्रमुख चाँदनी श्रेष्ठले तोकिएको व्याजदर एक वर्षसम्म नबढ्ने जानकारी दिइन्।
‘हाम्रो आधार दर एकदमै न्यून ७. ३ प्रतिशत मात्रै छ, यो अझै घट्ने क्रममा देखिन्छ, त्यसकारण ऋणीलाई एक वर्षसम्म ब्याज बढ्दैन, बरु घट्ने सम्भावना छ।’
उनका अनुसार केही महिनापछि अहिले ग्राहकले लिएको ७. ९९ प्रतिशत व्याजदर थप घट्न सक्छ। एक वर्षपछि पनि यदी आधार दर नबढेमा व्याजदर नबढ्ने उनले स्पष्ट पारिन्।
जग्गा किन्न, घर किन्न अथवा भएको जग्गामा घर बनाउन, घर मर्मत/सम्भार गर्न, बसोबासका लागि फ्ल्याट किन्न यस्तो ऋण पाइन्छ। यस्तो ऋण लिइसकेपछि ३५ वर्षसम्म किस्ता तिर्दै घटाउन सकिन्छ।
न्यूनतम ७ लाख रुपैयाँदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म यस्तो ऋण दिइने श्रेष्ठले जानकारी दिइन्।
त्यस्तै ऋण लिएको रकमको प्रशासनिक खर्चवापत ०. ७५ प्रतिशत शुल्क लाग्छ। ‘यो सेवा शुल्क राष्ट्र बैंकले नै तोकेको दर हो, योबाहेक बैंकले कुनै शुल्क लिँदैन’ उनले भनिन्।
बैंकले लिने शुल्क यत्ति नै भए पनि अन्य मालपोत तथा कागजातका लागि र भ्यालुएटरका लागि हुने खर्च पनि लाग्न सक्नेछ। नविल बैंकका देशभर १ सय १८ शाखा सञ्चालनमा छन्, तिमध्ये जुनसुकै शाखाबाट यो ऋण लिन सकिने उनले बताइन्।
बैंकबाट घर, जग्गाको ऋण लिनेले सोको कागजपत्र धितो राख्नुपर्छ। यदी जग्गा छ भने जग्गाको लालपूर्जा र चारकिल्ला प्रमाणित कागज चाहिने श्रेष्ठले बताइन्।
त्यस्तै जग्गाको नक्सा प्रिन्ट भने बैंकले नै निकालिदिने उनले बताइन्। ‘यसबाट ऋणीलाई नापी वा मालपोत कार्यालय गई रहनुपर्ने झन्झट रहेन, हामीलाई पनि जग्गाको एकीन सुनिश्चित हुने भयो’ उनले भनिन्।
त्यस्तै बनेको घर किन्नका लागि जग्गाको लालपूर्जासहित घरको नक्सापास, इजाजत पत्र, निर्माण सम्पन्नको कागजात पनि चाहिन्छ। त्यस्तै ऋणीले आफ्नो आम्दानीको स्रोत खुल्ने प्रमाणित कागज पनि बैंकमा बुझाउनुपर्छ।
ऋण लिनका लागि ती कागजात बैंकमा बुझाएपछि बैंकले ती मूल्याङ्याङ्कनकर्ता (भ्यालुएटर) लाई प्रदान गर्दछन्। भ्यालुएटरले सोका आधारमा घर वा जग्गा एकीन गर्दछ, त्यसको मूल्य पनि निर्धारण गर्दछ, सोही निर्धारित मूल्यबाट नै बैंकबाट पाइने उच्चतम ऋण तय हुन्छ।
‘त्यसपछि ग्राहकले सो बराबरको ऋणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्वीकृति दिएपछि प्रक्रिया अघि बढ्छ’ रिटेल, लेन्डिङ प्रमुख श्रेष्ठले भनिन्। उनका अनुसार प्रक्रिया अघि बढेको ३–४ दिनमै ऋण स्वीकृत हुने, नहुनेबारे निर्णय दिइने छ।
भ्यालुएटरले तय गरेको मूल्यमा ६० प्रतिशतसम्म र पहिलो पटक घर वा जग्गा किन्नेलाई ७० प्रतिशतसम्म ऋण प्रदान हुनेछ। भ्यालुएटरको टिमले सरकारले तोकेको र चलनचल्तीको दर दुवैलाई मूल्याङ्कन गरी मूल्य निर्धारण गर्दछ। यसमा पनि चलनचल्तीको मूल्यलाई बढी ध्यान दिने गरिएको छ।
एसएमई लोन पनि ७. ९९ प्रतिशतमै
३६ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा बैंकले साना तथा मझौला व्यवसाय (एसएमई) ऋण पनि ७. ९९ प्रतिशतमै दिने भएको छ। यो ब्याजदर पनि एक वर्षसम्म नबढ्ने एसएमई तथा माइक्रोफाइनान्स प्रमुख निरज बस्नेतले जानकारी दिए।
१५ लाखदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म बैंकले यस्तो ऋण प्रदान गर्ने उनले बताए। ‘देशमा हुने उत्पादनलाई प्रोत्साहन होस् भन्ने उद्देश्यले हामीले सस्तो दरमा एसएमई लोन ल्याएका हौँ’ उनले भने।
विभिन्न पसल, साना तथा मझौला उद्योग, कृषि उत्पादनसम्वन्धी उद्योग तथा व्यवसाय, स्वदेशी हस्तकला तथा गार्मेन्ट लगायत सबैजसो उद्योग व्यवसाय गर्नेले यस्तो ऋण लिन पाउँछन्। यसमा पनि सेवा शुल्क वापत ऋण रकमको ०. ७५ प्रतिशत लाग्दछ।
एसएमई लोनका लागि के के चाहिन्छ कागजात?
कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्र, प्यान, प्रवन्धपत्र तथा नियमावली, प्रमुख शेयरधनीको नागरिकता प्रतिलिपी तथा तीन पुस्ते विवरण, बिजनेस प्लान, व्यसायको उत्पादन तथा आम्दानीको विवरण खुल्ने कागजातपत्र जरुरत पर्दछ।
त्यस्तै धितोका रुपमा कम्पनी वा शेयरधनीको घर, जग्गा वा कुनै सम्पत्तिको प्रमाणित कागजपत्र पनि चाहिन्छ। व्यवसायबाट हुने आम्दानीको स्रोत खुल्ने विवरण पनि चाहिने बस्नेतले बताए।
साना तथा मझौला उद्योगका लागि आवश्यक उपकरण किन्न बैंकले दिने ऋणको चुक्ता अवधि ५ देखि ७ वर्षेसम्मको रहने उनले बताए।
त्यस्तै बैंकलाई चित्त बुझ्दो व्यवसाय भएमा सो नै धितोका रुपमा राखेर पनि ऋण दिन सकिने उनको भनाइ छ।
नयाँ व्यवसायका हकमा बैंकले रायसुझाव दिनेछ। ‘हाम्रो बैंकको सब्सिडायरी कम्पनी नविल इन्भेष्टमेन्ट छ, त्यहाँ भएका दक्ष जनशक्तिबाट उहाँहरुले सल्लाह सुझावहरु लिन सक्नुहुन्छ’ उनले भने।
ऋण लिनका लागि नविल बैंक नै किन रोज्ने?
ऋण लिने ग्राहकका लागि ब्याजदर सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ। बैंकको आधार दरले ब्याजदर निर्धारण हुने हो। त्यसकारण आधार दर कम भएको बैंक नै ऋणीको रोजाईका लागि अगाडि पर्दछ।
त्यस्तो बैंकको ब्याजदर पछिसम्म नबढ्ने र तलमाथि भइरहने संभावना कम हुन्छ। ‘कतिपय बैंकको आधार दर नै १० प्रतिशत छ, ती बैंकलाई ऋणीले तिर्ने ब्याज स्वभाविक रुपमा महँगो पर्न जान्छ’ बैंककी रिटेल लेन्डिङ प्रमुख श्रेष्ठले भनिन् ‘त्यसकारण आधार दर कम भएको बैंक रोज्नु उपयुक्त हुन्छ।’
अर्को तर्फ आधार दर तीन–तीन महिनामा परिवर्तन हुने भएकाले सो दर उच्च दरमा तलमाथि हुने खालको बैंक उपयुक्त नहुने उनले सुझाइन्।
‘नविल बैंकको स्थिर रुपमा थोरै अन्तरले मात्रै परिवर्तन हुन्छ, त्यसकारण हाम्रो बैंक ग्राहकका लागि उपयुक्त रोजाइ हो’ उनले भनिन्।
एक पटक नविल बैंकसँग कारोबार गर्नेहरुले पछि धेरै नै सहजता महसुस गर्ने उनले दावी गरिन्। ‘हामीले जहिले पनि ग्राहकको सेवालाई नै उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएका छौँ, त्यही कारण हामीलाई यो स्थानमा आउन सफलता मिलेको हो’ उनले भनिन्।
पछि अन्य ऋण लिन वा जुनसुकै कारोबारका लागि पनि सहजता दिलाइने उनले बताइन्। ‘हामी अहिले डिजिटल्ली रुपमा एकदमै फोकस भइरहेका छौँ, त्यसको लाभ त ग्राहकले नै लिने हो’ उनले भनिन्।
Prevकोरोनाविरुद्धको रुसी भ्याक्सिनमा संसारभर भरोसा किन छैन ? यी हुन् मुख्य ६ कारण
Nextकल्पनाकै साथी शर्मिलाले खोलिन् नयाँ कुरा,कृष्णबहादुरको टाउको चिनेर पनि सिङ्गो टोलले झुठो बोले (भिडियो हेर्नुहोस)